Uyilungiselela njani iNqaku elilandelayo leBhlog yakho kwiMpembelelo ePhezulu. | Martech Zone
Esinye sezizathu zokuba ndibhale eyam incwadi kublogi yequmrhu ishumi leminyaka eyadlulayo yayikukunceda abaphulaphuli bafumane ibhlogi yokuthengisa kwintengiso yokukhangela. Uphendlo alufani nolunye uhlobo kuba umsebenzisi wokukhangela ubonakalisa injongo njengoko befuna ulwazi okanye benza uphando ngokuthenga kwabo okulandelayo.
Ukulungiselela ibhlog kunye nomxholo kwisithuba ngasinye akukho lula njengokuphosa nje amagama aphambili kumxube… zininzi iingcebiso kunye namacebo onokuthi uwasebenzise ukuphucula isithuba kwaye usebenzise ngokupheleleyo yonke iposti.
UkuSebenza ngokuBanzi kwePhepha ngalinye
Ndiza kuthatha ukuba eyakho Inkqubo yolawulo lomxholo ilungiselelwe ngokupheleleyo, kwaye ibhlog yakho ngokukhawuleza kwaye mobile ephendulayo. Nazi izinto ezili-10 ezinomdla xa isiza sakho sirhubuluza kwaye salathiswa yinjinjini yokukhangela… kunye nezinto ezinokuthi zibandakanye umfundi wakho:
Isihloko Sekhasi Ukuza kuthi ga ngoku, eyona nto ibalulekileyo kwiphepha lakho yithegi yesihloko. Funda indlela yokwenza Lungiselela iithegi zakho zesihloko kwaye uya konyusa inqanaba lokucofa kunye nokucofa kwinqanaba lezithuba zakho zebhlog kwiphepha lokukhangela kwiinjini yokukhangela (SERPs) kakhulu. Yigcine phantsi koonobumba abangama-70. Qiniseka ukuba ubandakanya inkcazo yemeta eyomeleleyo yephepha- phantsi koonobumba abali-156.
Thumela i-Slug -Icandelo le-URL elimele iposti yakho ibizwa ngokuba yi-post slug kwaye inokuhlelwa kumaqonga amaninzi ebhlogi. Ukutshintsha ii-slugs ezinde ukuba zibe ngamafutshane, amagama aphambili kwigama eliphakathi kunokuba ube nexesha elide, udide ii-slugs zeposi uyonyusa izinga lokucofa kwinqanaba lokukhangela kwiinjini yokukhangela (ii-SERPs) kwaye wenze umxholo wakho ubelula ukwabelana ngawo. Abasebenzisi beenjini yokukhangela bafumana izenzi ezithe kratya kuphando lwabo, ke musa ukoyika ukusebenzisa indlela, yintoni, ngubani, phi, nini, kwaye kutheni kwii-slugs zakho ukomeleza i-slug.
Isihloko seposi Ngelixa isihloko sephepha lakho sinokulungiswa ekukhangekeni, isihloko sakho seposi kwi-h1 okanye i-h2 tag sinokuba sisihloko esinyanzelisayo esenza umdla kwaye sitsala ngakumbi ukucofa. Ngokusebenzisa i-tag yesihloko, uvumela i-injini yokukhangela ukuba yicandelo elibalulekileyo lomxholo. Amanye amaqonga okubhloga enza isihloko sephepha kunye nesihloko seposi ngokufanayo. Ukuba bayayenza, awunakukhetha. Ukuba abenzi njalo, ungazisebenzisa zombini ezi zinto!
Ukwabelana -Ukuvumela ukubanakho kweendwendwe ukuba zabelane ngomxholo wakho kuya kukufumanela iindwendwe ezininzi kakhulu kunokuba uzishiye zenzekile. Indawo nganye kwezentlalo inamaqhosha okwabelana ngokwasentlalweni angafuni manyathelo amaninzi okanye ukungena ... yenza kube lula ukwabelana ngomxholo wakho kwaye iindwendwe ziya kwabelana ngazo. Ukuba ukuWordPress, unokusebenzisa isixhobo esifana nesi jetpack ukupapasha ngokuzenzekelayo amanqaku akho ngaphandle kwalo naliphi na inani leziteshi zentlalo.
Imifanekiso -Umfanekiso ufanele amagama aliwaka. Ukubonelela ngomfanekiso okanye ividiyo kwiposti yakho yondla izivamvo kwaye yenza umxholo wakho ube namandla ngakumbi. Njengokuba umxholo wakho kwabelwana ngawo, imifanekiso iya kwabelwana ngayo nawo onke amaziko ezentlalo… khetha imifanekiso ngobulumko kwaye uhlala ufaka isicatshulwa esisesinye nenkcazo elungiselelwe. Sebenzisa i-thumbnail enkulu yeposi kunye nentlalontle efanelekileyo kunye iiplagi zokondla iya kwandisa amathuba okuba abantu bacofe xa besabelana.
umxholo -Gcina umxholo wakho ngokufutshane kangangoko ukuze ufumane iphuzu lakho. Sebenzisa amanqaku aneebhulethini, izihlokwana, isicatshulwa esibhalwe ngqindilili nesi-italic ukunceda abantu bahlole umxholo ngokulula kwaye bancede iinjini zokukhangela ziqonde amagama aphambili kunye namabinzana onqwenela ukuwafumanela. Funda indlela yokwenza Sebenzisa amagama aphambili ngokufanelekileyo.
Iprofayile yombhali -Ukuba unolwazi ngombhali wakho kubonelela ngento oyithandayo kwizithuba zakho. Abantu bafuna ukufunda izithuba ezivela kubantu ... ukungaziwa akubenzi abaphulaphuli kakuhle kwiiblogi. Kananjalo amagama ombhali akha igunya kunye nokwabelana ngolwazi kuluntu. Ukuba ndifunda iposti enkulu, ndihlala ndilandela umntu okwi-Twitter… emva koko ndifunde umxholo owongezelelweyo abapapashayo.
izimvo Izimvo ziphucula umxholo kwiphepha elinomxholo owongezelelweyo ofanelekileyo. Ikwabonelela ngethuba kubaphulaphuli bakho lokuzibandakanya negama lakho okanye inkampani. Sizishiyile uninzi lweeplagi zomntu wesithathu kwaye sikhethe ukungagqibeki kweWordPress- edityaniswe kwii -apps zabo zeSelfowuni, isenza ukuba kube lula ukuphendula nokuvuma.
Biza wenze -Ngoku ukuba unomfundi kwibhlog yakho, ufuna ukuba benze ntoni? Ngaba ungathanda ukuba babhalise? Bhalisela ukhuphelo? Yiya kumboniso wesoftware yakho? Ukulungiselela iposti yakho yebhlog ayigqibekanga ngaphandle kokuba unendlela yomfundi yokuzibandakanya nzulu nenkampani yakho.
Iindidi kunye neethegi - Ngamanye amaxesha iindwendwe zeinjini yokukhangela zicofa kodwa zingakufumani oko zikufunayo. Ukuba nezinye izithuba ezidwelisiweyo ezifanelekileyo zinokubonelela ngokuzibandakanya okunzulu kunye nendwendwe kwaye uzithintele zingangxoli. Yiba nezinto ezininzi onokukhetha kuzo ukuze undwendwe luhlale kwaye uzibandakanye ngakumbi! Unokukunceda oku ngokuqinisekisa ukuba unexabiso elinengqiqo kwiindidi, ukuzama ukwabela isithuba ngasinye ubuncinci kubo. Kwiithegi, uya kufuna ukwenza ngokuchaseneyo-ukuzama ukongeza iithegi zokudityaniswa kwamagama aphambili anokuqhubela abantu kwiposti. Iimpawu azincedi nge-SEO ngokhangelo lwangaphakathi kunye nezithuba ezinxulumene noko.
Ngaphambi kokuba ndipapashe iposti nganye yeBhlog
Uninzi lwezi zinto zibalulekileyo zonke zilungiselelwe kwaye zizenzekelayo ngokufakwa kunye nokucwangciswa kweqonga lakho lokubloga. Nje ukuba ndichithe ixesha kumxholo, ndiyahamba ngamanyathelo akhawulezayo okuphucula izithuba zam, nangona:
isihloko -Ndizama ukunxibelelana nomfundi kwaye ndenze umdla wokufuna ukwazi ukuze bacofe. Ndithetha ngqo nabo kunye nawe okanye nawe!
Umfanekiso oPhakathi -Ndisoloko ndizama ukufumana umfanekiso owahlukileyo nonyanzelisayo weposi. Imifanekiso kufuneka iqinise umyalezo ngokungabonakaliyo.
Ulawulo - Abaveleli baskena ngaphambi kokuba bafunde, ke ndizama ukusebenzisa izihlokwana, uluhlu olunamachaphaza amnyama, uluhlu olunamanani, iikowuti zeebhloko, kunye nemifanekiso ngokukuko ukuze bakwazi ukuqhubekeka kulwazi abaludingayo.
Thumela i-Slug -Ndizama ukugcina phantsi kwamagama ama-5 kwaye kufanelekile kwisihloko. Oku kwenza ukuba kube lula ukwabelana kunye nekhonkco ngakumbi.
Iziboniso -Ndisoloko ndikhangela iYouTube kwiividiyo zobungcali zokwabelana kunye nokusebenzisa imifanekiso emininzi kangangoko ndinako. Ndiyiqambe kabusha imifanekiso ngokufanelekileyo ndisebenzisa iideshi, ezinceda ukukhangela imifanekiso kunye nokwenza iphepha ngokufanelekileyo. Qaphela umfanekiso wam obonisiweyo wale post Uluhlu lweblog-post-lokutshekisha.png.
Links -Ndisoloko ndizama ukubandakanya amakhonkco kwizithuba ezifanelekileyo ngaphakathi komxholo wam ukuze umfundi akwazi ukwehlisa ulwazi oluthe kratya.
udidi -Ndizama ukukhetha i-1 okanye i-2 kuphela. Sinezithuba ezinzulu ezigubungela ngakumbi kodwa ndizama ukugcina ekujolise kuko kujolise kakhulu.
tags -Ndithetha ngabantu, iimveliso kunye namagama emveliso endibhala ngawo. Ukongeza, ndiza kwenza uphando ngokudibanisa amagama abantu abanokuthi basebenzise ukukhangela iposti.
Inkcazo yeMeta -Inkcazo encinci phantsi kwesihloko kunye nekhonkco kwiposti yakho kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela inokulawulwa yi inkcazo yemeta. Thatha ixesha kwaye ubhale inkcazo enyanzelekileyo eqhuba umdla kwaye uxelele umsebenzisi wokukhangela ukuba kutheni kufuneka bacofe kwinqaku lakho.
Igrama kunye nopelo -Amanqaku ambalwa endiwashicilelayo ukuba andihlunguzeli intloko entloni njengoko ndifunda kwiintsuku kamva okanye ndibuyise izimvo kumfundi ngempazamo yegrama okanye isipelingi endisenzileyo. Ndizama ukuqinisekisa zonke iiposti nge Igrama ukuzisindisa… nawe kufuneka!
Emva kokuba ndipapashe iBhlog nganye yePosi
wokuKhuthaza -Ndiqinisekile ukuba mna nyusa izithuba Ndibhala kuwo onke amajelo kunye nalo lonke ithuba, ukwenza ukujonga kwangaphambili kunye nokumakisha abantu, ii-hashtag, okanye iisayithi endizikhankanyileyo.
Izixhobo ezifana I-Agorapulse inokuza kakhulu kulungelelwaniso olulula lwenqaku ngalinye. Amanye amanqaku athandwa kakhulu kangangokuba ndicwangcisa i-tweet inyanga nenyanga, izibhengezo zomnyhadala endiwucwangcisayo ukuya kumnyhadala, kunye nezinye izithuba ndiziphindaphinda kube kanye njengoko kusengqiqweni. Esi sisixhobo esimangalisayo esenza ukuba ubomi bam bube lula kakhulu. Nantsi indlela eyenza ngayo ukubandakanyeka kwam kwimidiya yoluntu… inyanga ukuza kuthi ga ngoku:
Ukwazisa: Ndingummeli webhanti oziqhenyayo kwiAgorapulse!
Nanga amanqaku ahambelana nokwenza okungakunceda:
tags: iprofayili yombhalingeposi blogulungiselelo lweposti yebhlogiindidiudidiuluhlu lokuhlolaUkuThengiswa kweMpahlaUmfanekisokwenziwa kanjaniUyenza njani iposti yebhlogimifanekisoukuxhuma kwangaphakathiUkusetyenziswa kwegama elingundoqoUkulungiswaLungiselela iposti yebhlogisihloko sephephaiposi slugthumela i-thumbnailisihloko seposiukwabelanaSocial Media Marketingukwabelana ngoluntuukumakishaiividiyoyoutube
Amashishini asebenzisa iMithombo yeendaba yezeNtlalo ukuqikelela iMfuno: PepsiCo
Okt 24, 2012 ngexesha 4:38 AM
Enkoso ngokwabelana! 😉
Ngomhla wama-23 ku-Disemba 2012 ngo-2: 07 PM
ezi ziingcebiso eziluncedo ngokwenene.
Feb 1, 2013 ngo-12: 13 PM
ENKOSI ngolu lwazi lubalulekileyo kwiithegi ezahlukeneyo kwaye iyintoni injongo yecandelo ngalinye leethegi. Uzicacisile uninzi lweengcinga zam "ezinamafu" kwimiba yeethegi.